Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Zombie Apocalypse ma ku taal Horizon?
Ugu dambeyntii way dhacday, apocalypse zombie waa halkan! Nolosha sida aan ognahay waxay ku dhowdahay inay weligeed isbedesho! Ma jiraan bandhigyo TV-ga, ma jiro ciyaaro fiidiyoow ah, ma sii jiri doonto Twitter!?! Sideen ku badbaadi doonnaa!? Oo sug hal ilbiriqsi, maxaan cuni doonaa?! Ma jiraan cunto aad u dheeraysa, ma jiraan dukaamo kafeega, ma jiraan wax dalabaad ah oo cunto geyn ah iyo dukaamada raashinka? Aduunka maxaan sameyneynaa?
Warka fiicani waxa weeye, ciwaankani maaha mid dhab ah. Akhbaarta xun ayaa ah, weli ma aadan diyaarsaneyn. Laakin dhinaca fiican ka eeg. Furaha Nolosha Supply wuxuu halkan u joogaa inuu ku caawiyo! Waxaan kuu diyaarin karnaa adiga, qoyskaaga, asxaabtaada iyo xitaa xaafaddaada. Markaad barato sida loo beero cuntadaada, ubadkaaga u bartay inay cunaan cunto caafimaad leh, oo cusub oo aad soo saarto oo aad la shaqeyso xaafadaada si aad u qaybiso ugana ganacsato cuntadaas, dhamaanteen waxaan ka badbaadi karnaa apocalypse zombie! Nasiib wanaag, kobcinta cuntadaada waa madadaalo, ka sahlan sidaad u malaynayso, shaqo ka yar sidaad u malaynayso, mana aha inaad keligaa sameyso! Qoyska Furaha Nolosha Supply wuxuu leeyahay wax kasta oo aad u baahan tahay. Anagoo adeegsanayna shabakadayada wada-hawlgalayaasha ah iyo shaqaalahayaga kartida leh ee barayaasha, waxaan ku tusi karnaa sida loo beero sahay badan oo miro iyo khudaar ah.
Intaa waxaa dheer, in aad si dabiici ah u korto oo aad ku barato qaar ka mid ah farsamooyinka bacriminta fudud ee qashinkaaga dhirta, waxaad dib u dhisi kartaa ciidda waxaadna noqon kartaa mid aad u yar oo ku tiirsan bacriminta. Beertaada waxay si aad ah ugu kori doontaa carrada dib loo soo celiyay si ay uga caawiso dhirtu inay si buuxda u koraan. Isku xirka bulshadaada, qof kastaa wuxuu diiradda saari karaa kobcinta wax yar oo ka duwan si aan weli u sii wadno noocyo kala duwan oo dhadhan fiican leh. Qaadista fudud, qasacadaha, fuuqbaxa iyo kaydinta saxda ah ee cuntada waxay hubin doontaa in bulshadu sii wadi doonto horumarkeeda, xitaa inta lagu jiro xilliga qaboobaha ugu daran.
Markaa waad aragtaa, ma jiraan wax laga walwalo! Xataa haddii dunidu isu beddesho baabba', kama welweli doontid inaad cunto eyda dhacay inta noloshaada ka hadhay. Adiga iyo bulshadaada waxaad u cuni kartaan sida boqorada sababtoo ah waxaad kasbateen xirfada iyo aqoonta lagama maarmaanka u ah inaad bixiso baahida ugu fudud ee bini'aadamka, cunto macaan. Warka wanaagsani waa, xitaa haddii apocalypse-ka zombie uusan waligiis midho dhalin, hadda waxaad awood u leedahay inaad hoos u dhigto raadkaaga kaarboonka, aad u noolaato si joogto ah, u dhisto nidaam difaac adag adiga oo cunaya sunta cayayaanka iyo cuntooyinka kiimikada ah, kordhinta qiimaha hantidaada iyo bulshadaada sii shabakad isku filnaansho. Waxaan kugu dhiirigelineynaa inaad qaado tillaabada ugu horreysa oo nala soo xiriir Key To Life Supply ka hor inta ay goori goor tahay!